လူသားမဆန်ဘဲ မျှတမှုမရှိတဲ့နေရာလို့ အာဆင်နယ်ကို ကင်ပွန်းတပ်ပေးခဲ့တဲ့ အိုဇေးလ် - Shwe Soccer
လူသားမဆန်ဘဲ မျှတမှုမရှိတဲ့နေရာလို့ အာဆင်နယ်ကို ကင်ပွန်းတပ်ပေးခဲ့တဲ့ အိုဇေးလ်
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပေါင်(၄၂)သန်းနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ ကွင်းလယ် တိုက်စစ်ကစားသမား မီဆွတ်အိုဇေးလ် ကို ပရီးမီးယားလိဂ် လူစာရင်းကနေ ဖယ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့် အိုဇေးလ်ဖက်က ဝမ်းနည်းကြောင်း စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ် အသင်းက အိုဇေးလ် ကို အသုံးမပြုတာ ကြာပြီဖြစ်ပြီး နည်းစနစ်လိုအပ်ချက်ကြောင့်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်ရာသီအတွင်း စံချိန် တင် ဂိုးဖန်တီးမှု့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အိုဇေးလ် အတွက်တော့ အတော်လေး စိတ်ပျက်စရာကောင်းခဲ့မှာ အသေချာပါပဲ။
အိုဇေးလ်က”ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာ ကျနော် ချစ်မြတ်နိုးစွာကစားပေးခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီစာကိုရေးရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်လူစာရင်းမှာ ကျနော့်ကို ချန်လှပ်ခဲ့တဲ့အတွက် တကယ်ကိုပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလို ဒေါသလည်းထွက်မိပါတယ်။၂၀၁၈ မှာ အာဆင်နယ်နဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကလပ်အပေါ် ကျနော့်ဖက်က သစ္စာရှ်ိမှု့နဲ့ပေးဆပ်မှု့ကို ပြသခဲ့ပေမယ့် ပြန်ရရှိလိုက်တာကတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ တကယ်ကိုပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာ သစ္စာရှိမှု့ဆိုတာက တကယ်ကိုပဲ ခေါင်းပါးလာပါပြီ။ကျနော့်အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပေါင်းများစွာမှာထဲက အခွင့်အရေးရရှိမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပါးစပ်ပိတ်နေခဲ့တာ ပါ။”
အိုဇေးလ်က လူစာရင်းကနေပယ်ချခံရပေမယ့် အခွင့်အရေးပြန်ရအောင် ကြိုးစားမယ့်အကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဂျာမဏီအသင်းသားဟောင်းဖြစ်တဲ့ အိုဇေးလ်က “ကိုရိုနာ ဗိုင်းရက်စ် မပျံနှံခင်မှာ နည်းပြသစ် အာတီတာ လက်အောက်မှာ အာဆင်နယ် အသင်းကတိုးတက်လာခဲ့သလို ကျနော်လည်း အမှန်တကယ်ကိုပျော် ရွှင်ခဲ့ရတာပါပဲ။ကျနော်တို့က ကောင်းမွန်တဲ့အနေထားမှာရှိနေခဲ့ပြီး ကျနော့်ရဲ့ ယူံကြည်မှု့ ၊ကြုခိုင်မှု့ တွေက လည်းအကောင်းဆုံးအနေထားမှာရှိနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမယ့်ရုတ်တရက်ကြီး အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး ကျနော့်အတွက် အာဆင်နယ် မှာ ပွဲထွက်ခွင့်ကပျောက်ဆုံး ခဲ့ရပြန်ပါတယ်”
“ကျနော့်ဖက်က ဘာများပြောနိုင်ဦးမလည်း? လန်ဒန်ကကျနော့်အိမ်လိုဖြစ်နေပါပြီ။ကျနော့်မှာ သူငယ်ချင်းများစွာရှိသလို အသင်းပရိတ်သတ်တွေနဲ့လည်းသိပ်ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုး ရှိနေတာပါ။ကျနော့်အနေနဲ့ ဘာတွေပဲဆက်ဖြစ်ပါစေ နေရာပြန်ရဖို့တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကျနော့်ရဲ့ (၈)ရာသီမြောက်ရာသီအတွက်လည်း အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်သွားမှာပါ။ကျနော့်အနေနဲ့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသာအရာဖြစ်လို့ ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်သလို နေ့ရက်တိုင်းကို ပိုမိုခက်ခဲတဲ့ လေ့ကျင့်မှု့တွေနဲ့ ကျော်ဖြတ်ပြီး လူသားဆန်မှု့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ တရားမျှတမှု့မရှိတဲ့အရာမှန်သမျှကို ရင်ဆိုင်သွားပါမယ်”လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ေပါင္(၄၂)သန္းနဲ႔ဝယ္ယူထားတဲ့ ကြင္းလယ္ တိုက္စစ္ကစားသမား မီဆြတ္အိုေဇးလ္ ကို ပရီးမီးယားလိဂ္ လူစာရင္းကေန ဖယ္ထုတ္လိုက္တာေၾကာင့္ အိုေဇးလ္ဖက္က ဝမ္းနည္းေၾကာင္း စာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အာဆင္နယ္ အသင္းက အိုေဇးလ္ ကို အသုံးမျပဳတာ ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး နည္းစနစ္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ ပရီးမီးယားလိဂ္တစ္ရာသီအတြင္း စံခ်ိန္ တင္ ဂိုးဖန္တီးမႈ႔ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အိုေဇးလ္ အတြက္ေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းခဲ့မွာ အေသခ်ာပါပဲ။
အိုေဇးလ္က”ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းမွာ က်ေနာ္ ခ်စ္ျမတ္နိုးစြာကစားေပးခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ္အသင္းရဲ့ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ ဒီစာကိုေရးရတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ္လူစာရင္းမွာ က်ေနာ့္ကို ခ်န္လွပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ တကယ္ကိုပဲစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသလို ေဒါသလည္းထြက္မိပါတယ္။၂၀၁၈ မွာ အာဆင္နယ္နဲ႔ စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကလပ္အေပၚ က်ေနာ့္ဖက္က သစၥာရွ္ိမႈ႔နဲ႔ေပးဆပ္မႈ႔ကို ျပသခဲ့ေပမယ့္ ျပန္ရရွိလိုက္တာကေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနလို႔ တကယ္ကိုပဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ဒီေန႔ေခတ္မွာ သစၥာရွိမႈ႔ဆိုတာက တကယ္ကိုပဲ ေခါင္းပါးလာပါၿပီ။က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱေပါင္းမ်ားစြာမွာထဲက အခြင့္အေရးရရွိမလားဆိုတဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ပါးစပ္ပိတ္ေနခဲ့တာ ပါ။”
အိုေဇးလ္က လူစာရင္းကေနပယ္ခ်ခံရေပမယ့္ အခြင့္အေရးျပန္ရေအာင္ ႀကိဳးစားမယ့္အေၾကာင္းလည္းေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။ဂ်ာမဏီအသင္းသားေဟာင္းျဖစ္တဲ့ အိုေဇးလ္က “ကိုရိုနာ ဗိုင္းရက္စ္ မပ်ံႏွံခင္မွာ နည္းျပသစ္ အာတီတာ လက္ေအာက္မွာ အာဆင္နယ္ အသင္းကတိုးတက္လာခဲ့သလို က်ေနာ္လည္း အမွန္တကယ္ကိုေပ်ာ္ ရႊင္ခဲ့ရတာပါပဲ။က်ေနာ္တို႔က ေကာင္းမြန္တဲ့အေနထားမွာရွိေနခဲ့ၿပီး က်ေနာ့္ရဲ့ ယူံၾကည္မႈ႔ ၊ၾကဳခိုင္မႈ႔ ေတြက လည္းအေကာင္းဆုံးအေနထားမွာရွိေနခဲ့တာပါ။ဒါေပမယ့္႐ုတ္တရက္ႀကီး အေျခအေနေတြကေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး က်ေနာ့္အတြက္ အာဆင္နယ္ မွာ ပြဲထြက္ခြင့္ကေပ်ာက္ဆုံး ခဲ့ရျပန္ပါတယ္”
“က်ေနာ့္ဖက္က ဘာမ်ားေျပာနိုင္ဦးမလည္း? လန္ဒန္ကက်ေနာ့္အိမ္လိုျဖစ္ေနပါၿပီ။က်ေနာ့္မွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာရွိသလို အသင္းပရိတ္သတ္ေတြနဲ႔လည္းသိပ္ေကာင္းတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ရွိေနတာပါ။က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဘာေတြပဲဆက္ျဖစ္ပါေစ ေနရာျပန္ရဖို႔တိုက္ခိုက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး က်ေနာ့္ရဲ့ (၈)ရာသီေျမာက္ရာသီအတြက္လည္း အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္သြားမွာပါ။က်ေနာ့္အေနနဲ႔ စိတ္ဆုံးျဖတ္ၿပီးသာအရာျဖစ္လို႔ ေျပာင္းလဲသြားမွာမဟုတ္သလို ေန႔ရက္တိုင္းကို ပိုမိုခက္ခဲတဲ့ ေလ့က်င့္မႈ႔ေတြနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး လူသားဆန္မႈ႔ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ တရားမၽွတမႈ႔မရွိတဲ့အရာမွန္သမၽွကို ရင္ဆိုင္သြားပါမယ္”လို႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
Previous Article လာလီဂါ ထီးနန်းအပြောင်းလဲမှာ ဇီဒန်း နဲ့ ကိုးမန်း ကို ထားခဲ့ လိုက်…
Next Article ဘိုင်ယန်ကို ဘာကာနဲ့ ဂိုးပြတ်ရှုံးပြီးမကြာခင် အေတီကိုနဲ့ပါ ထပ်ရှုံးခဲ့ပြန်တဲ့ ဆွာရက်ဇ်